Kid Winter Knit Warm Skull Ski Beanie Cap satroka ho an'ny vehivavy
Fitaovana: Ny raiki-pitia karandoha mafana satroka dia vita amin'ny polyester 100% , wizay matevina sy mahazo aina. Afaka mahatonga anao hahatsapa ho mafana sy lamaody.
SIZE iray ihany no mety indrindra: saribakoly skull skull ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny elastika, refy iray misy elatra tsara, ho an'ny manodidina ny loha: manodidina (56-58cm) izay mifanaraka amin'ny haben'ny lohan'ny olona.
Famolavolana antsipirihany:NY beanie satroka voaravaka matevina miaraka amina endrika "Slouch" be loatra, maivana nefa mafana hatrany. Io no fitsangatsanganana tsara indrindra tokony hananana ary azo ampiasaina amin'ny hetsika ivelan'ny trano toy ny fitsangatsangana na fanaovana ski amin'ny andavan'andro toy ny fiantsenana na jogging.
Mora misasa: ny zaza ririnina knit mafana satroka afaka azo nosasana tanana sy nosasana tanana.
Saron-doha vita amin'ny pataloha mafana amin'ny ririnina ho an'ny zazavavy zazalahy
Miovaova: ny satroka mafana ba nataony dia elastika ary azo zahana, maivana ary mahazo aina, tsy hiteraka tsindry amin'ny lohan'ny zanakao eo am-pitandroana hafanana, mety amin'ny zazakely, zazakely, ankizy sy ankizy, mora ampiarahina amin'ny akanjo isan'andro ary afaka manampy saina sy mahafinaritra kokoa amin'ny akanjo isan'andro.
Trano an-trano Alefaso ny Cap amin'ny ririnina miaraka amin'ny saron'ny sofina feno sofina ho an'ny lehilahy
VERSATILITE & INNOVATION - Ity aleon'ny trano satroka ririnina manasongadina famolavolana volon'ondry vaovao mirindra hiarovana ny sofinao sy ny tendanao amin'ny hatsiaka sy ny rivotra. Rehefa manafana ny vatanao dia avadiho fotsiny ny fonon'ny sofina mba hifehezana ny hafanan'ny vatanao.
SUPERIOR COMFORT - ny polyester / landihazo plastikan'ny satrokantsika mihazakazaka dia mahazo aina tokoa ary manome fika azo antoka. Masinina manasa mangatsiaka amin'ny tsingerina marefo; rivotra maina.
REDUCE GLARE - ity takelaka ririnina ity miaraka amn'ny Brim Ear flap for Men dia mampiseho volavolan-dalàna maizina izay manampy amin'ny fiarovana ny masonao amin'ny masoandro mandritra ny fanatanjahantena ririnina. Toy ny hoe mihazakazaka, mandeha an-tongotra ary mitsangatsangana an-tanety mampiasa azy io amin'ny lalao golf amin'ny fararano sy ririnina.
Satroka fanatanjahan-tena an-kalamanjana Sun Visor ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Fanidiana ny Hook sy Loop
Esory ny masonao tsy mahita ny masonao: marary ve ianao ary reraky ny masoandro mahazo ny masonao, nefa manajamba anao vetivety fotsiny. Izay no nahatongavantsika teto. Ireo satroka visor unisex azo ovaina ireo dia hitazona ny masonao tsy hahita ny masonao, ary tena milay rehefa manao izany koa.
Tsara ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena sy ivelany: Ity ovavahady sseranana sla visor hats dia natao ho maivana, afaka miaina ary mahazo aina. Tsy hanakantsakana anao mihitsy izy ireo, ka izy ireo no fitaovana tsara indrindra hivezivezy, jogging, fanatanjahan-tena ary hetsika hafa any ivelany.
Fitaovana manara-penitra Premium: Raha momba ny anay ovavahady sseranana sla visor hamin'nys, izahay dia mamaritra fa tsy hampiasa afa-tsy ny lamba landihazo voajanahary tsara indrindra, ary koa ny fizotran'ny famokarana manara-penitra sy ny fifehezana kalitao henjana.
Fitaovana lamaody sy lamaody: ovavahady sseranana sla visor hats s dia mihoatra ny fomba hiarovan-tena amin'ny masoandro, na sombin-fitaovana fanatanjahan-tena. Izy ireo dia tena lamaody fampiasa amin'ny lamaody, ary fomba tsara hanatsarana ny fanatanjahantena an-drenivohitra na ny fomba mahazatra.
Satroka Snapback Camouflage azo ovaina ho an'ny lehilahy
Camouflage Snapback Hat ho an'ny fitsangatsanganana, fitsangantsanganana, fanaovana zaridaina, jono ary hetsika hafa an-kalamanjana.
Ho an'ny fizaran-taona: lohataona, fahavaratra, fararano.
Ny habe azo ovaina ary mifanaraka amin'ny olon-dehibe unisex.
Mety amin'ny ankamaroan'ny taona.
Mavesatra maivana ary ahazoana aina, mety amin'ny trano sy ivelany.
Cap UPF any ivelany 50+ Fanjonoana masoandro miaraka amina vozona
Miomana amin'ny Adventure: Mitady ny tonga lafatra ve ianao ovavahady sla cap mba hamenoana ny akanjo manaitaitra anao amin'ny jono, fihazana, na dia fitobiana manaraka. Vao hitanao io. izanyovavahady sla cap dia azo ampiharina, miaina, maivana ary mahazo aina - raha fintinina dia tokony hisy ny satrony rehetra.
Asa ivelan'ny trano: Na mikasa ny hanjono anaty farihy ianao, na hihaza any anaty ala, na te-hiverina fotsiny ary hankafy ny eny ivelany miaraka amin'ny satroka mangatsiaka eny an-tànany, ity satroka mahafinaritra ity dia hahazoana antoka fa tsy ho hitan'ny masonao ny masonao. ary misoroka sunburn rehetra.
Kalitao Premium: Raha momba ny anay satroka masoandro manjono ivelany, izahay dia mamaritra fa tsy hampiasa afa-tsy ireo fitaovana tsara indrindra, ary koa ny fizotran'ny famokarana manara-penitra sy ny fifehezana kalitao henjana.
Flap Fiarovana amin'ny sofina sy hatoka: miaraka amin'ny sisiny malalaka, ity satroka masoandro manjono ivelany ity Izy io koa dia misy fonosam-piarovana amin'ny masoandro azo ampiharina izay afaka manarona ny lamosin'ny tendanao sy ny sofinao, ary manakana ny mety ho fahasosorana sy sunburn tsy hipetraka amin'ny tara-pahazavana mivantana mandritra ny fotoana lava.
Flat Top Style Tafika Miaramila
Satroka miaramila ambony tafahoatra ambony tafahoatra ho an'ireo lehilahy manana haben'ny loha
Satroboninahitra ambony ambony, volavolan-dalàna henjana sy miolaka, loko mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna
Satroka miaramila ambony sy maharitra ny kalitao
Vita tamin'ny fanidiana hook sy loop manidy
DESIGNY STYLISH: Ireo mahafinaritra kID boy girl baseball cap hamin'ny dia ny Toddler Hat tonga lafatra izay ho reharehan'ny zanakao hitafy sy hisehoseho amin'izay alehany rehetra.
QUALITY PREMIUM: Ny Cotton maharitra 5-tontonana sy ahazoana aina kID boy girl baseball cap hamin'ny Manasongadina sary an-tsokosoko feno molotra, sarin-tsoratra Panda maroloko ao amin'ny fanakatonana ny Sweatband sy Velcro ho mora fanitsiana mba tsy hanesoran'ny zanakao azy.
Satroka fanatanjahan-tena azo antoka amin'ny masoandro miaro amin'ny masoandro amin'ny golf Tennis
Endri-javatra: satroka visor feno vaky azo esorina, manana fiarovana UV masoandro tsara.
Size: ity Satroka fanatanjahan-tena azo antoka amin'ny masoandro miaro amin'ny masoandro amin'ny golf Tennis , Size iray ihany no mifanaraka indrindra. Miaraka amin'ny fanakatonana lamina miverina Velcro.
Satroka fanatanjahan-tena tsy voarindra ho an'ny lehilahy sy vehivavy UPF 50+ mihazakazaka ivelany mihazakazaka
Masoandro: Manana 50+ UPF hanakanana taratra UV manimba ary manampy amin'ny fiarovana ny hoditrao, fitaovana manokana misy coating anti-UV izay nandalo ny fitsapana UPF 50+. izay tena miaro UV. Raha atambatra amin'ny Wide sy Long Visor Design, ny lohanao, ny tavanao, ny oronao ary ny hatokao dia azo rakofana tsara. Izy io dia miaro anao amin'ny sun burn tsara kokoa. Breathable maina maina haingana: Amin'ny alàlan'ny fampiharana lamba maivana sy hamandoana ary famolavolana harato goavambe, mitondra anao milay sy mahazo aina be. Ny satroka dia afaka maina vetivety aorian'ny fanasana
Fitaovana fitsangatsanganana an-kalamanjana an-kalamanjana miaraka amin'ny fonony azo esorina amin'ny harato
Satroka satroka masoandro feno volo miaraka amin'ny rivotra tsy azo atsofohana ho an'ny fitsangantsanganana
Premium polyester: ny satroka masoandro feno molotra dia vita amin'ny polyester premium, izay sariaka amin'ny hoditra sy mahazo aina, ary koa manome asa fanamainana haingana ho an'ny akanjo isan'andro.
Fiarovana amin'ny masoandro: ny mason'ny masoandro dia misy volavolan-dalàna lava kokoa sy vozona manodidina ny vozona, manolotra fiarovana amin'ny masoandro ary miaro ny hoditra amin'ireo singa ary manimba UVA / UVB